Iikuki zifakiwe kunye namaphepha kwi Law & More kwiwebhusayithi
Ziziphi i cookies?
Icookie sisicatshulwa esincinci, esincinci esincinci esibekwe kwikhompyuter yakho, ifowuni okanye ithebhulethi xa undwendwela iwebhusayithi Law & More. Iikuki zifakiwe kunye namaphepha kwi Law & More iiwebhusayithi. Ulwazi olugcinwe kulo lungathunyelwa kumaseva kutyelelo olulandelayo kwiwebhusayithi. Oku kuvumela iwebhusayithi ukuba ikwazise, ​​ngokungathi kunjalo, ngexesha lotyelelo olulandelayo. Owona msebenzi ubalulekileyo wecookie kukwahlula undwendwe olunye kolunye. Ke ngoko, iicokies zihlala zisetyenziswa kwiiwebhusayithi apho kufuneka ungene khona. Umzekelo, ikuki iqinisekisa ukuba uhlala ungene ngemvume xa usebenzisa iwebhusayithi. Unokwala ukusetyenziswa kweicookies nangaliphi na ixesha, nangona oku kunokunciphisa ukusebenza kunye nokusebenziseka lula kwewebhusayithi.
Law & More isebenzisa ii-cookies ezisebenzayo. Ezi kuki zibekwe kwaye zibandakanyeke kwiwebhusayithi ngokwayo. Iikuki zokusebenza ziyafuneka ukuze uqiniseke ukuba iwebhusayithi isebenza kakuhle. Ezi khukhi zibekwa rhoqo kwaye aziyi kucinywa ukuba uthatha isigqibo sokungazamkeli ii-cookies. Iikuki zokusebenza ezigciniweyo azigcini iinkcukacha zobuqu kwaye azinalo ulwazi onokutsalwa ngalo. Ii-cookies zomsebenzi ziyimizekelo esetyenziswayo ukubeka imephu yendawo ukusuka kwiMephu zikaGoogle kwiwebhusayithi. Olu lwazi aluchazwa ngokusemandleni. Ngapha koko, Law & More ibonise ukuba asabelani ngolwazi noGoogle kwaye uGoogle unokungasebenzisi idatha abayifumana kwiwebhusayithi ngenjongo yabo.
Law & More isebenzisa iicookies ezivela kuGoogle Analytics ukwenzela ukubeka iliso kwindlela yokuziphatha kwabasebenzisi nakwindlela ngokubanzi kunye nokufumana iingxelo. Ngeli xesha lale nkqubo, idatha yobuqu yeendwendwe zewebhusayithi iphononongwa ngokusebenzisa iikuki zokuhlalutya. Iicookies zohlalutyo ziyavumela Law & More ukulinganisa ukugcwala kwiwebhusayithi. Ezi zibalo ziqinisekisa ukuba Law & More Uyayiqonda indlela esetyenziswa rhoqo iwebhusayithi, loluphi ulwazi olundwendwele olukhangela kuzo kwaye ngawaphi amaphepha kule webhusayithi ajongwa kakhulu Nje ngeziphumo, Law & More Uyazi ukuba zeziphi iinxalenye zewebhusayithi ezidumileyo kwaye yeyiphi imisebenzi ekufuneka iphuculwe. Ukugcwala kwiwebhusayithi kuhlalutywe ukuze kuphuculwe iwebhusayithi kunye nokwenza amava abatyeleli bewebhusayithi abe mnandi njengoko kunokwenzeka. Izibalo eziqokelelweyo azilandeleki ebantwini kwaye azichazwanga ngokusemandleni. Ngokusebenzisa i Law & More iiwebhusayithi, uyavuma ukuqhubekiswa kwedatha yakho yobuqu nguGoogle ngendlela nangeenjongo ezichazwe apha ngasentla. UGoogle unokubonelela ngalolu lwazi kubantu besithathu ukuba uGoogle unyanzelekile ngokusemthethweni ukuba enze njalo okanye enze ngathi umntu wesithathu uqhubekeka ngolwazi egameni leGoogle.
Iikuki zokudibanisa imidiya yoluntu
Law & More ikwasebenzisa ikuki ukwenza ukudityaniswa kweendaba zentlalo. Le webhusayithi inezinto zonxibelelwano kwiintanethi zentlalo Facebook, Instagram, Twitter kunye LinkedIn. La makhonkco enza ukuba kunokwenzeka ukuba abelane okanye akhuthaze amaphepha kwezo nethiwekhi. Ikhowudi efunekayo ukuze kufezekiswe ezi khonkco zihanjiswa ngu-Facebook, Instagram, Twitter kunye ne-LinkedIn ngokwazo. Phakathi kwezinye, ezi khowudi zibeka ikuki. Oku kuvumela iiwebhsayithi zokunxibelelana zikuqaphele xa ungena kwinethiwekhi yezoluntu. Ngapha koko, ulwazi malunga namaphepha owabelana nawo ayaqokelelwa. Law & More Ayinampembelelo ekubekeni nasekusetyenzisweni kweicookie ngabantu besithathu. Ngolwazi oluthe kratya malunga nedatha eqokelelwe kunxibelelwano lweendaba zentlalo, Law & More ibhekisa kwiingxelo zabucala ze-Facebook, Instagram, Twitter kunye ne-LinkedIn.
Ukuba awufuni Law & More Ukugcina iicookies kwiwebhusayithi, unokukhubaza ukwamkeleka kweicookies kulungiselelo lwakho lwebrowser. Oku kuqinisekisa ukuba iicookies azisagcini. Nangona kunjalo, ngaphandle kwicookies, eminye imisebenzi yewebhusayithi inokungasebenzi kakuhle okanye ingasebenzi nakanye. Kuba iicookies zigcinwe kwikhompyuter yakho, unokuzicima ngokwakho. Ukwenza oko, kuya kufuneka ubonane nencwadana yesikhokelo sebrawuza yakho.